क्षतिपूर्ति थप सहज बनाउन पहल गर्दैछौं - Karobar National Economic Daily
query_builderJuly 19, 2017 10:12 AM supervisor_account visibility577
रघुराज काफ्ले कार्यकारी निर्देशक, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड
वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश गएका नेपालीको मृत्यु, अंगभंग र बिरामी हुने अवस्था कस्तो देखिएको छ ?
वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड स्थापना भएदेखिको रेकर्ड हेर्दा मृत्यु हुने र त्यसको क्षतिपूर्ति लिनेको संख्या वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । विदेश जाने तथा मृत्यु, अंगभंग र बिरामी हुने क्रम बढ्दो छ । तर, हामीले यसलाई केसँग पनि दाँजेर हेर्नुपर्छ भने विदेश जानेको संख्या कति छ त ?
विदेश जानेहरू र विदेशमा रहने नेपालीको सम्पूर्ण संख्या पनि बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । त्योअनुसार विदेशमा मृत्यु हुनेको संख्या पनि क्रमशः वृद्धि हँुदै गइरहेको छ । विदेश जाने र त्यहाँ बस्ने जसरी बढ्दै गएका छन्, सोही अनुपातमा मर्ने र दुर्घटनामा परी अंगभंग हुने र रोग लाग्ने पनि बढ्दै गइरहेका छन् । करिब–करिब दुवैको अनुपात बराबर देखिएको छ । विदेशमा बस्नेको संख्या बढेका कारण घटना हुने संख्या पनि स्वतः बढ्दै जाने हुन्छ ।
रोजगारीका लागि विदेश गएर मृत्यु हुने नेपालीको संख्यालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले कस्तो कार्यक्रम ल्याएको छ ?
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सरकारको खातामा जाने गरी पैसा धेरै उठाएको हुँदैन । पासपोर्ट बनाउँदा केही रकम सरकारले लिने हो । कामदारले विदेश जानुअघि वैदेशिक रोजगार कल्याणकरी कोषका लागि १ हजार रुपैयाँमात्र लिने गरेको छ ।
तर सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको व्यवस्थापनका लागि गरेको खर्च हेर्याै भने सरकारले नगरेको भन्ने अवस्था छैन । दक्षिण एसिया र अरु मुलुकमा हेर्ने होे भने नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा जति सेवा सुविधा पाएका छन्, त्यति अरु मुलुकले दिएको पाइँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने आफना नागरिकको संरक्षणका लागि आवश्यक पर्नेे नीतिनियम नेपालले जति अवलम्बन अरु देशले गरेका छैनन् । जस्तो– स्वाथ्य परीक्षण गरेर स्वस्थ मान्छेमात्र जाने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालबाट जानु भन्दा पहिला अभिमुखिकरण तालिम लिएर विदेशको बारेमा जानेर बुझेर जाने व्यवस्था गरिएको छ । सकेसम्म सीपमूलक तालिम लिएर जानुहोस् भनेर त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू पनि रहेका छन् ।
विदेशमा हुने दुर्घटनाका लागि जीवन बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । कार्य क्षेत्रमा गम्भिर बिरामी पर्न सक्ने हुनाले बिरामी बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । विदेशमा कुनै कानुनी समस्यामा पर्न सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर निःशुल्क कानुनी सेवा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
वकिलको जति खर्च लागे पनि नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा पनि वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दा निःशुल्क रूपमा सरकारले लड्ने व्यवस्था गरेको छ । बिरामी, अंगभंग वा मृत्यु भएकाका आफन्तलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई जति खर्च लागे पनि नेपाल ल्याउने प्रबन्ध गरेको छ ।
विदेशमा मृत्यु भएका र अंगभंग भएर फर्किएका कामदारका आफन्तलाई १२ कक्षासम्म अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । कामदारको सदस्य नेपालमा बिरामी भए ५० हजारसम्म उपचार खर्च दिने व्यवस्था मिलाएको छ । कोही मृत्यु भएर शव नेपालको एयरपोर्टबाट घरसम्म पु¥याउने व्यवस्था मिलाएको छ ।
विदेशमा आपत विपतमा परेका कामदारका लागि केही दिन खान बस्नका लागि बस्ने ठाउँको व्यवस्था गरेको छ । यस्ता थुपै्र सेवासुविधा दिने काम सरकारले गरिरहेको छ । यसकारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीका लागि सरकार जिम्मेवार भएन भन्ने कुरा गलत हो ।
यति हँुदाहँुदै पनि सरकारले अझ बढी गर्नुपर्ने केही कार्यक्रम होला नि त ?
हो, यति हुँदाहँुदै पनि अभैm सरकारले गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई सिपयुक्त बनाएर पठाउनुपर्छ । ५ लाख नेपाली विदेश जान्छन् तर त्यसमध्ये १५ प्रतिशत कामदारमात्र सिपयुक्त भएर विदेश जाने गरेको छ । सीप सिकेर गएन भने त्यही कामदार आपतविपत, दुर्घटना आदि समस्यामा पर्ने गरेको छ ।
सीप विस्तार गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान पुगेको छैन । हामीले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गराउन विभिन्न माध्यमबाट सूचना प्रवाह गरिरहेका छौं । त्यसबाट धेरैले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गराउन सहयोग गरिरहेको छ ।
अर्को कुरा नेपालले जहाँ जहाँ कामदार पठाउँदै आएको छ, ती देशमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसरी श्रमसम्भैmता गर्दा रोजगारदातामूलक हाम्रा कामदारको सुरक्षाका लागि थप जवाफदेही हुने गर्छ । सरकारले श्रमसम्झौताका लागि प्रयास गरेपनि कतिपय अवस्थामा सफल हुन सकिएको छैन ।
श्रमस्वीकृति लिएर विदेशमा भिसामा नै काम गरिरहेका नेपालीको मृत्यु हुँदा क्षतिपूर्ति पाउनबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । यसका लागि सरकारले के गरिरहेको छ ?
सरकारले यो व्यवहारिकतालाई मनन गरेर केही नियममा परिवर्तन गरेको छ । जस्तो– श्रमस्वीकृति लिएर केही पछिमात्र कामदार विदेश जाने गरेका छन् । विदेश गएर पनि कम्पनी वा रोजगारदाताले कामदारको बस्ने अवधि केही ढिलो गरेर दर्ता गर्ने गरेको छ ।
कामदारले काम गर्न थालेपछि उसको बसाइ अवधि गणना गर्ने गरेको हुन्छ । यसले गर्दा कामदारको श्रम स्वीकृतिको म्याद र त्यहाँ काम गर्ने अवधि नमिल्न सक्छ । यसले गर्दा कामदार करार अवधि सकिनु केही दिनअघि दुर्घटना भए वा मृत्यु भए समय अभावका कारण क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था रहन्छ । यो स्थितिमा सहयोग पु¥याउन वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन गरिएको छ ।
केही दिनभित्र राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । नियमावलीमा श्रम स्वीकृतिको म्याद एक वर्ष अघिपछि हेरेर क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । बिमाको हकमा २०७३ सालदेखि नै यो व्यवस्था लागू भइसकेको छ ।
वैदेशिक रोजगारी रोजगारी मृत्यु